Ciidamada Fedaraalka Itoobiya ayaa wareegay xarumihii muhiimka ee Magaalada Jigjiga. – Xeernews24
Ciidamada Fedaraalka Itoobiya ayaa wareegay xarumihii muhiimka ee Magaalada Jigjiga.
4. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Ciidamada dowladda Federaalka ee Itoobiya ayaa la wareegay dhammaan goobaha muhiimka ah ee ku yaal Magaalada Jigjiga ee Xarunta Maamulka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Guud ahaan Magaalada ayaa waxaa saaka laga dareemayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan oo aad u badan iyo kuwa siyaasadeed.
Baarlamaanka Maamulkaas ayaa Maanta halkaas ku yeelanayo kulan xasaasi ah oo la doonayo in wax looga badalo qodobo ka mid ah dastuurka Maamulkaas u dajisan.
Dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inay is khilaafeen Madaxda Maamulkaas waxayna arrintaas sababtay in Maanta ciidamo lagu soo daadiyo .
Meelaha ay la wareegeen ciidamada Itoobiya ayaa waxaa kamid ah xarunta Baarlamaanka iyo Xarunta Telefishinka ESTV.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar(Cabdi Iley) ayaa la sheegayaa inuu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo madax banaani, inkastoo wararkan uu yahay mid aad isu soo tarayay.
Xiisada saaka ka jirta Jigjiga ayaa timid, maalin kaddib markii magaalada Diri-dhaba uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen dhinacyo ka soo horjeeda Maamulka uu hoggaamiyo Cabdi Maxamuud Cumar(Cabdi Iley)
Tan iyo markii uu is bedelka siyaasadeed ee dhanka awoodda uu ka dhacay Itoobiya ayaa waxaa yaraaday awooddii maamulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya uu hoggaamiyo Cabdi Maxamuud Cumar, gaar ahaan xidhiidhkii uu la lahaa dowladda Dhexe.
Ra’isulwasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed ayaa badalay dhammaan qaababkii siyaasadeed oo ay dowladdii hore kula macaami jirtay maamulada ka jiro deegaanadaas, waxaana muuqato in markaas culeys xoog leh lasoo saaray ismaamulka Soomaalida ee uu hoggaamiye Cabdi Iley.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/07/23.jpg 360 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-04 10:13:342018-08-04 10:13:34Ciidamada Fedaraalka Itoobiya ayaa wareegay xarumihii muhiimka ee Magaalada Jigjiga.
Xaalada Siyaasadeed ee Magaalada Jigjga oo Foolan Itoobiya oo Xabsi Guri ka dhigtay Cabdi Iley Madaxweyhii Hore Dowlad deegaanka...